Sida loo doorto nidaamka waraabka ee beeraha kala duwan iyo mugga wax soo saar - Nidaamka Baradhada
Mar dhow ama goor dambe, waaxda beeraha soo koraya waxay sare u qaadeysaa su'aasha ah baahida loo qabo in lagu qalabeeyo beeraha iyo nidaamyada waraabka. Suuqa casriga ahi wuxuu bixiyaa tiro badan oo qalab ah waraabka. Sida loo fahmo iskuulkan oo loo doorto ikhtiyaarka ugu kalsoonida badan iyo faa'iidada leh ee xaaladaha gaarka ah, waxaan ku sheegi doonaa qodobkaan.
Rakibaadda baahsan ee wareega
Waqtiga xaadirka ah, mashiinada wajiga ballaaran waxay yihiin baahida ugu weyn ee suuqa Ruushka. Waxay awoodaan inay daboolaan 20 illaa 200 hektar oo dhul ah, iyadoo kuxiran dhererka rakibaadda. Faa'iidada ugu weyn ee nidaamyada wareega ee taagan waa iskood u madax banaanaan: makiinadaha ayaa si guul leh u fuliya howlahooda iyada oo aan la xakameyn karin wadaha.
Markaad ka fekereyso nidaamka waraabka ee goob gaar ah, dhowr arrimood oo muhiim ah waa in la tixgaliyaa: cabirka berrinka, qaabkiisa, muuqaalka muuqaalka, iyo jiritaanka caqabadaha (aagagga kaynta, xargaha korantada). Waraabinta dhul balaaran waxay ubaahantahay dhowr saydhis. Iyaga oo adeegsanaya kartidooda, waxaa suurtagal ah in lagu gaaro ceymis dhan 80-85% aaggiisa oo dhan, oo loo arko inay natiijo fiican u tahay mashiinnada wareega.
Rakibida waaxeed (qayb ka mid ah goobada) waxay kuu oggolaaneysaa inaad waraabiso berrinka adigoon taaban meelaha caqabadaha ah. Si kastaba ha noqotee, haddii mashiin noocan oo kale ah uu daboolayo qayb leh xagal dhexe oo aan ka yarayn 180 digrii, markaa isticmaalkiisu wuxuu noqdaa mid aan faaido lahayn.
Waa in fiiro gaar ah la siiyaa xulashada qalabka waraabinta beeraha dhul aad u adag. Isbeddelada sare ee sare u qaadida waxay sababi karaan in damiyaha uu ku taliyo inta lagu gudajiro howlgalka. Intaa waxaa sii dheer, waa in maskaxda lagu hayaa markii la rakibayo rakibaadda dariiqyo muhiim ah, cadaadiska laga soo galayo dariiqa dhexe ee taageerada mashiinka ayaa kordha (taas oo macnaheedu yahay kaliya tuubooyinka leh dhumuc balaaran waa in loo adeegsadaa duulimaadka ugu horreeya ee rakibaadda), iyo kala duwanaanshaha ugu weyn, ka badan “qaro weyn” tuubooyin ayaa looga baahan doonaa dhismaha. Waxay sidoo kale saameyn ku yeelan doontaa saldhiga bamgareynta iyo dhuunta tuubbada caagga ah, qiimaha qalabka oo dhan ayaa kor u kici doona si la mid ah.
Si aad u xilsaarto mashiinka wareegga, waxaa lagama maarmaan ah in la diyaariyo kaabayaasha: dhig tuubbo caag ah, ku shub salka la taaban karo ee santuuqa dhexe ee firdhiska, dooro goob matoor oo go'aamiya isha korantada.
Haddii korantadu ku xidhan tahay garoonka, waxaa lagu rakibi karaa goob shidaal keenta. Haddaysan ahayn, xalka kale wuxuu noqon lahaa rakibida matoorka dhaliyaha iyo matoorka matoorka.
Si kastaba ha noqotee, waxaas oo dhami waxay quseeyaan beeraha ay ku soo bandhigayaan teknoolojiyada waraabinta macmalka ah dhulkooda markii ugu horeysay. Laakiin waxaa jira kiisas isdaba joog ah marka shirkad ay ku xalliso arrinta ku-beddelashada nidaamyada jira (badiyaa laga soo bilaabo waqtiga USSR) nidaamyo casri ah. Casriyeynta nidaamka si dabiici ah ayaa uga qiimo jaban, maadaama shirkaddu ay leedahay kaabayaashii hore ee rakibaadda hore: dhuumaha iyo rugta matoorka ayaa la ilaaliyaa.
Isla mar ahaantaana, tayada shaqada duugga iyo aaladaha cusubi waa mid aan dhammaanayn. Gawaarida casriga ah waxay daboolaan ku dhowaad dhammaan duurka. Hawsha waraabka ee aagagaga aan la gaari karin waxaa qabta cannono biyaha adag. Mashiinnada cusub ee waraabka waxaa ku qalabeysan noocyo badan oo suumanka firdhinta ah oo ku habboon waraabinta dalagyo kala duwan. Shaqo badan oo wax soo saar leh, firdhiyaha wareegga waxaa lagu qalabeyn karaa nidaamka codsiga bacrimiyeyaasha dareeraha ah, xarun cimilo leh dareemayaal qoyaanka ciidda.
Mashiinnada saydhista dabka. Xallinta Meelaha Yar yar
Meelaha aysan suurtagal ahayn in la helo mashiinno xagal ballaaran ah (qaanuun ahaan, kuwanu waa aagag yar yar oo leh dhul u dhexeeya 20 illaa 50 hektar), waxaan kugula talineynaa in lagu rakibo mashiinno waraabinta nooca-durugsan.
Mid ka mid ah dhirta noocaas ah ayaa si wax ku ool ah u waraabisa 25-30 hektar. Mabda'a hawlgalkiisu waa sahlan yahay: marka hore, iyadoo la kaashanayo cagaf, xariijimuhu waa bilaa cillad, saldhigga bamka ayaa bilaabmaya, oo xarkaha ayaa bilaabaya in si toos ah dib loogu hagaajiyo (Thanks to biyaha ku soo qulqulaya marawaxadda cadaadiska ka imanaya matoorka matoorka). Inta lagu jiro tuubada tuubada, waraabintu sidoo kale way dhacdaa. Naqshadeynta noocan oo kale ah ayaa la tijaabiyay tobanaan sano oo hawlgal ah oo adduunka oo dhan ah waxayna la kulantay shaqooyinkeeda intii suurtogal ah.
Faa'iidooyinka aan la kala sooci karin ee mashiinnada nooca-durbaanka ah waxaa ku jira kharashkooda (marka la barbar dhigo xajmiga ballaaran), iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa iyo fududeynta rakibaadda (taas oo kuu oggolaaneysa inaad si dhakhso leh uga dhaqaaqdid hal garoon oo kale).
Laakiin "dhuxusha" waxay leeyihiin dib-u-dhacyadooda. Si loo bilaabo, ugu yaraan laba illaa saddex qof waa inay xakameeyaan hawlgalka mashiinka nooca dumu-da. Xawaaraha waraabka ee mashiinka durdurrada nooca rusheeya, marka la barbar dhigo mashiinnada xajmiga ballaaran leh, sidoo kale waxay ka baxaan wax badan oo la doonayo: waraabinta dhul caadi ah oo ah 30 hektar oo cabir ah ayaa qaadan doona mashiinka ugu yaraan 10 maalmood. Isla mar ahaantaana, tayada waraabinta ayaa noqonaysa mid aan lagaran karin, maadaama ay adag tahay in la xakameeyo isku-habeynta biyaha, taas oo macnaheedu yahay in dhirta qaybo ka mid ah duurka aysan heli karin qoyaan looga baahan yahay.
Si loo xilsaaro mashiinnada nooca durbaanka loo adeegsado, waxaa sidoo kale lagama maarmaan noqon doonta in la dhigo dhuumo caag ah, laakiin halkii saldhig la taaban karo looga saari lahaa, waxaa loo baahan doonaa tuubooyin biyo-gelis ah si ay ugu xiraan "biiqda" dhuunta. Tirada haweyeyaasha waxay kuxirantahay qaabeynta garoonka, celcelis ahaan, waxaa lagu rakibay 50 mitir kasta (haddii "xargaha" loo isticmaalo qalabka koongareeska) ama 60 mitir kasta (haddii "xargaha" bilaa console). Cutubyada matoorrada korantada ama naaftada waxaa loo isticmaali karaa in mashiinka biyo lagu kululeeyo.
Halkii ay ka isticmaali lahaayeen tuubbo caag ah, waxaan macaamiishayada kula talineynaa inay isticmaalaan aluminium dhakhso u urursan. Thanks to naqshadeeda, si fudud ayaa loo kala diri karaa loona geyn karaa qaybo cusub haddii loo baahdo.
Gabagabadii, Waxaan jeclaan lahaa inaan carrabka ku adkeeyo in mid kasta oo ka mid ah mashiinnada la soo bandhigay ay ku habboon yihiin xaaladaha qaarkood, ay leeyihiin faa'iidooyinkiisa iyo khasaarehooda oo ay baahi weyn ugu qabaan suuqa. Khabiirada ayaa had iyo jeer kaa caawin doona doorashada.
Tags: 2020 .2Noocyada durbaanada durbaankarakibida wareega ballaaranwaraabka
GC "khudaarta Dmitrov": koorso ku saabsan otomatikka
Kiremko: Qalabka Soo Saarashada Cunto baradhada
Bisha Furan #DOKAGENE